အလှူလေးတွေလှူတဲ့ အခါ အရေးကြီးပြီး ပြုလုပ်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ခေးဆက်သွင် – Cele Oscar
သရုပ်ဆောင် ခေးဆက်သွင် ကတော့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်း တွဲများတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ် တွေရဲ့အားပေး ဝန်းရံခြင်း ကို ရရှိလာ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စုဆောင်း ထားတဲ့ အနုပညာ ကြေး တွေနဲ့ အလှူ အတန်းတွေ လည်း အမြဲလိုလို လှူဒါန်းသူ တစ်ဦး ဖြစ်တာ ကြောင့် လူတိုင်းက အားကျ အတု ယူနေကြတာပါ။ သူမကတော့ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာလည်း ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေ တာကို လည်း မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။.
ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်း ကတည်း ကနေ ယနေ့ချိန် အထိ ဒီလှုပ်ရှား မှုနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကြိုးစား ပမ်းစား Speak Out လုပ်ပေး နေတာ ကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူး ခြင်းတွေကို ရရှိ ထားတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ စားဝတ် နေရေး ခက်ခဲ နေကြတဲ့ ပြည်သူ တွေ အတွက် စားနပ် ရိက္ခာများ လည်း လှူဒါန်း ပေးနေတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်း လောက်ကလည်း ခေးဆက်သွင် ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ တွင် လက်ရှိ အခြေအနေတွေကြောင့် အလှူတွေ လှူတဲ့ အခါ စိတ်ချ ယုံကြည်တဲ့ သူထံ တွင်သာ လှူဒါန်း သင့်ကြောင့် ရေးသား ပြောပြ လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကလည်း “အလှူတွေ လှူတဲ့အခါ အလှူခံပြီး တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက် ပေးကြတဲ့သူတွေက လုံခြုံရေး အရရော အသက် အန္တရာယ်အတွက် ရော တချို့မှတ်တမ်းတင်မပေးတာ အသေးစိတ် မဖော်ပြပေးနိုင်တာရှိပါလိမ့်မယ် ယုံကြည် စိတ်ချရတဲ့သူမျိုး လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေလက်ထဲ အရောက် ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ သူမျိုးဆီမှာ စိတ်ပြတ်ပြတ် နဲ့ လှူတာကောင်းပါတယ်… အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့ ဘယ်လက် ကလှူတာ ညာလက်မသိကြပါစို့ အရေးတော်ပုံကြီး အောင်တော့မှ ဒို့ကတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဘယ်လောက် လှူခဲ့လဲဆိုတာ ကြွားတော့ မယ်ကွာ ” ဆိုပြီး လက်ရှိမှာ လုပ်သင့်တဲ့ အရာ လေးတွေကို ပြောပြ လာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိ ရအောင် ဒီသတင်း လေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူ တင်ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သရုပျဆောငျ ခေးဆကျသှငျ ကတော့ ရုပျသံ ဇာတျလမျး တှဲမြားတှငျ ပါဝငျ သရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျ တှရေဲ့အားပေး ဝနျးရံခွငျး ကို ရရှိလာ တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ စုဆောငျး ထားတဲ့ အနုပညာ ကွေး တှနေဲ့ အလှူ အတနျးတှေ လညျး အမွဲလိုလို လှူဒါနျးသူ တဈဦး ဖွဈတာ ကွောငျ့ လူတိုငျးက အားကြ အတု ယူနကွေတာပါ။ သူမကတော့ လကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံက လူထု လှုပျရှားမှုတှေ မှာလညျး ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ တကျကွှစှာ ပူးပေါငျး ပါဝငျနေ တာကို လညျး မွငျတှကွေ့ရမှာပါ။.
ဖဖေျောဝါရီလ အစပိုငျး ကတညျး ကနေ ယနခြေိ့နျ အထိ ဒီလှုပျရှား မှုနဲ့ ပတျသကျ ပွီး ကွိုးစား ပမျးစား Speak Out လုပျပေး နတော ကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ ခြီးကြူး ခွငျးတှကေို ရရှိ ထားတာ လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ အပွငျ တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ စားဝတျ နရေေး ခကျခဲ နကွေတဲ့ ပွညျသူ တှေ အတှကျ စားနပျ ရိက်ခာမြား လညျး လှူဒါနျး ပေးနတောပါ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျး လောကျကလညျး ခေးဆကျသှငျ ရဲ့ လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာ တှငျ လကျရှိ အခွအေနတှေကွေောငျ့ အလှူတှေ လှူတဲ့ အခါ စိတျခြ ယုံကွညျတဲ့ သူထံ တှငျသာ လှူဒါနျး သငျ့ကွောငျ့ ရေးသား ပွောပွ လာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
သူမကလညျး “အလှူတှေ လှူတဲ့အခါ အလှူခံပွီး တဈဆငျ့ ဆောငျရှကျ ပေးကွတဲ့သူတှကေ လုံခွုံရေး အရရော အသကျ အန်တရာယျအတှကျ ရော တခြို့မှတျတမျးတငျမပေးတာ အသေးစိတျ မဖျောပွပေးနိုငျတာရှိပါလိမျ့မယျ ယုံကွညျ စိတျခရြတဲ့သူမြိုး လိုအပျနတေဲ့ သူတှလေကျထဲ အရောကျ ထညျ့ပေးနိုငျတဲ့ သူမြိုးဆီမှာ စိတျပွတျပွတျ နဲ့ လှူတာကောငျးပါတယျ… အရေးတျောပုံ အောငျမွငျဖို့ ဘယျလကျ ကလှူတာ ညာလကျမသိကွပါစို့ အရေးတျောပုံကွီး အောငျတော့မှ ဒို့ကတော့ ဘာတှလေုပျခဲ့လဲ ဘယျလောကျ လှူခဲ့လဲဆိုတာ ကွှားတော့ မယျကှာ ” ဆိုပွီး လကျရှိမှာ လုပျသငျ့တဲ့ အရာ လေးတှကေို ပွောပွ လာတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိ ရအောငျ ဒီသတငျး လေးကို တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူ တငျဆကျ ပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။